जनवरी 19, 2022 डिसेम्बर १०, २०२१ द्वारा btolbert
जब हामी बाइबल पढ्छौं, हामीलाई थाहा छ कि हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। वास्तवमा, बाइबलले यो पनि भन्छ कि मानिस भन्दा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु राम्रो हो। तर हाम्रो हेरचाह गर्नेहरूको आज्ञा पालन गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीसँग छ। हामी यसको बारेमा केहि पछि थप कुरा गर्नेछौं। त्यसोभए हामी परमेश्वरप्रति हाम्रो आज्ञाकारिताको बारेमा बाइबलले के भन्छ हेरौं।
\_v 1 यसकारण तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नू, र उहाँका आज्ञाहरू, उहाँका विधिहरू, उहाँका न्यायहरू र उहाँका आज्ञाहरू सधैं पालन गर्नू ।”
यस शास्त्रले हामीलाई बताउँछ कि हामीले प्रभुलाई प्रेम गर्न आवश्यक छ, र त्यसपछि हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्न वा पालन गर्न आवश्यक छ। हामीले हाम्रो लागि परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्दा हामी व्यवस्थामा आशिष्हरूको यो प्रतिज्ञा पाउँछौं।
27 आशिष्, यदि तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्यौ, जुन आज म तिमीहरूलाई आज्ञा दिन्छु।
28 अनि श्राप, यदि तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरका आज्ञाहरू पालन गरेनौ, तर तिमीहरूलाई नचिनेका अरू देवताहरूको पछि लाग्‍ने गरी आज मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको बाटोबाट तर्केर जाऊ।”
हामीले भर्खरै पढेका पदहरूले हामीलाई परमेश्वरलाई प्रेम गर्न र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्न निर्देशन दिइरहेका छन्। यदि हामीले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छौं भने आज्ञाकारी हुन सजिलो हुनेछ। त्यसैले हामी देख्न सक्छौं कि यो हाम्रो जीवनमा परमेश्वरप्रतिको हाम्रो प्रेमलाई जीवित राख्नु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ ताकि हामी परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भइरहन सक्छौं।
परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा आमाबाबुलाई माया गर्न र आज्ञा पालन गर्न पनि बोलाउनुहुन्छ। के तपाईलाई थाहा छ कि हाम्रा बुबा र आमाको सम्मान गर्नु दश आज्ञा मध्ये पाँचौं आज्ञा हो? यदि तपाईं अनजान हुन सक्नुहुन्छ भने, दस आज्ञाहरू ईसाई इतिहासको महत्त्वपूर्ण भाग हुन्। परमेश्वरले यी नियमहरू बनाउनुभयो र मोशालाई इस्राएलीहरूसँग बाँड्नको लागि ढुङ्गामा लेख्नुभयो। यी आज्ञाहरू मध्ये कुनै एक उल्लङ्घन गर्नाले परमेश्वरसँगको तपाईंको सम्बन्धलाई उल्लङ्घन गर्छ। त्यसले भन्यो, यसले हामीलाई हाम्रा आमाबाबुको आदर, माया र आज्ञा पालन गर्नु परमेश्वरको लागि कत्ति महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ।
"१२ तिम्रा बुबा र आमाको आदर गर: परमप्रभु तिम्रा परमेश्‍वरले दिनुहुने देशमा तिम्रा आयु लामो रहोस्।"
युवाहरू बूढो हुँदै जाँदा र स्वतन्त्रतामा परिपक्व हुँदै जाँदा, जवान व्यक्ति र उनीहरूका आमाबाबुबीच स्वाभाविक सङ्घर्ष आउन सक्छ। यो सङ्घर्ष युवाहरू वयस्कतामा संक्रमणको रूपमा विशिष्ट छ। तर जब हामी किशोर र युवा वयस्कहरूमा हुर्कन्छौं, परमेश्वरले अझै पनि हामीलाई हाम्रा आमाबाबुको आज्ञा पालन गर्न र आदर गर्न बोलाउनुहुन्छ। हाम्रा आमाबाबुको आदर गरेर, हामी परमेश्वरको महिमा र आदर गर्न सिक्छौं, र जब हामी परमेश्वरलाई आदर गर्छौं, हामी पवित्र रहन्छौं।
6 छोराछोरीहरू, प्रभुमा आफ्ना आमाबाबुको आज्ञा पालन गर: किनकि यो ठीक छ।
2 आफ्‍ना बुबा र आमालाई आदर गर। जुन प्रतिज्ञासहितको पहिलो आज्ञा हो।
3 ताकि तिम्रो भलो होस्, र तिमी पृथ्वीमा लामो समयसम्म बाँच्न सक।”
त्यसोभए, परमेश्वरले हामीले उहाँको आज्ञापालन गरेको चाहनुहुन्छ, र उहाँ हामीले हाम्रा आमाबाबुको आज्ञा पालन गरेको चाहनुहुन्छ, र परमेश्वरले हामीलाई हामीमाथि शासन गर्नेहरूको आज्ञापालन गर्न बोलाउनुहुन्छ। "हामीमाथि शासन गर्नेहरू" हाम्रो ख्याल गर्ने हाम्रो जीवनमा हाम्रा शिक्षक वा अधिकार हुनेछन्।
"17 तिनीहरूको आज्ञापालन गर जसको तपाईंमाथि शासन छ र आफूलाई आत्मसमर्पण गर्नुहोस्: किनकि तिनीहरूले तपाईंको आत्माको लागि हेरचाह गर्छन्, जसरी तिनीहरूले लेखा दिनु पर्छ, ताकि तिनीहरूले यो आनन्दको साथ गरून्, र शोकमा होइन, किनकि यो तपाईंको लागि बेकार हो।
यहाँ लेखकले हामीलाई सिकाउँछन् कि जब हामीले हाम्रो आत्माको ख्याल राख्नेहरूको आज्ञापालन गर्छौं, तिनीहरूले हामीसँग काम गर्दा आनन्द पाउनेछन्। असल र ईश्वरीय अधिकारको आज्ञाकारिता मुक्तिको विशेषता हो। जब परमेश्वरले हाम्रो हृदय परिवर्तन गर्नुहुन्छ, उहाँले हामी भित्र केहि राख्नुहुन्छ जसले हामीलाई उहाँको वचन पालन गर्न र हाम्रो आत्माको लागि हेरचाह गर्न प्रेरित गर्दछ। येशू आज्ञाकारिताको उदाहरण पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो इच्छा परमेश्वरलाई सुम्पनुभयो र हाम्रो पापको लागि क्रूसमा जानुभयो ताकि हामी बचाउन सकौं।
१९ किनकि जसरी एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले धेरैलाई पापी बनाइयो, त्यसरी नै एउटैको आज्ञापालनले धेरैलाई धर्मी बनाइनेछ।
आदमले हाम्रो हृदयमा अनाज्ञाकारिता पैदा गर्नुभयो, तर येशूले हामीलाई उहाँको बलिदानद्वारा आज्ञापालन गर्ने क्षमता दिनुभयो।
प्रेरित पावलले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दा, उहाँले तिनीहरूको आज्ञाकारी स्वभाव र तिनीहरूको सत्यको ग्रहणद्वारा परिवर्तन भएकाहरूलाई स्वीकार गर्नुभयो। जब हामी प्राप्त गर्छौं, मुक्ति परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आत्माको फल दिनुहुन्छ। यी फलहरू वा विशेषताहरूले हामीलाई हाम्रो आत्माको हेरचाह गर्नेहरूप्रति आदर र आज्ञाकारी हुन मद्दत गर्दछ।
१९ किनकि तिम्रो आज्ञाकारिता सबै मानिसहरूमा परेको छ। यसकारण म तिम्रो तर्फबाट खुसी छु: तर पनि म तिमीलाई असल कुरामा बुद्धिमानी र खराबको बारेमा सरल बनाउन चाहन्छु।"
"२२ तर आत्माको फल प्रेम, आनन्द, शान्ति, सहनशीलता, कोमलता, भलाइ, विश्वास,
23 नम्रता, संयम: यस्तो विरुद्ध कुनै कानून छैन।
प्रेम, आनन्द, शान्ति, कोमलता, भलाइ र विश्वास भएको हृदयलाई सही कुरा पालन गर्न कुनै समस्या हुनेछैन। "त्यस्ता विरुद्ध, कुनै कानुन छैन! ” जुन ख्रीष्टमा साँचो स्वतन्त्रता हो! रोमीहरूले हामीलाई परमेश्‍वर र उहाँका आज्ञाहरूका अधीनमा रहन पनि सिकाउँछन्।
"13 प्रत्येक आत्मा उच्च शक्तिहरूको अधीनमा होस्। किनकि परमेश्वरको बाहेक अरू कुनै शक्ति छैन: शक्तिहरू जो परमेश्वरबाट नियुक्त हुन्छन्।
बाइबलको निष्कर्षले हामीलाई पहिले परमेश्वरको आज्ञापालन गर्न, हाम्रा आमाबाबुको आज्ञा पालन गर्न र हामीमाथि शासन गर्नेहरूलाई पनि आह्वान गरिरहेको छ। आज्ञाकारिता परमेश्वरको वचनको ठूलो भाग हो। जब हामी आज्ञाकारी हुन्छौं, हामी आदर गर्छौं, र यो विशेषता हाम्रो गवाहीको लागि आवश्यक छ। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो आत्मा र कल्याणको ख्याल राख्नेहरूलाई प्रेम गर्न प्रेरित गर्नुहुनेछ। हामीलाई साँच्चै माया गर्ने र हानि पुऱ्याउन चाहने व्यक्तिबीचको भिन्नता बुझ्न उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। त्यसोभए तपाईलाई सम्भव सबै भन्दा राम्रो जीवन ल्याउन बलिदान गर्नेहरूको आज्ञाकारी हुन नडराउनुहोस्। आफ्नो जीवनमा मुक्तिको फल र ख्रीष्टमा साँचो स्वतन्त्रताको आनन्द लिनुहोस्।
RHT द्वारा तयार गरिएको विचार
कोटिहरु मेरो क्रिश्चियन वाक, युवा जनता पाठ, युवा रैली सन्देश पोस्ट नेभिगेसन
पाप भनेको के हो?
के तपाई आफ्नो शत्रुलाई चिन्नुहुन्छ?